Maxaa ka soo baxay kulamo dhex maray Weftiga Ingiriiska iyo dhinacyada siyaasada Somaliland? « SAWNEWS NETWORK
« Dhibaatooyinka Tahriibka ee dhalinta Somaliland Maxaa u xal ah?
Magacyada Guddi turxaan-saar oo Shirguddoonka Wakiilladu magacaabay »
Maxaa ka soo baxay kulamo dhex maray Weftiga Ingiriiska iyo dhinacyada siyaasada Somaliland?
Hargeysa (Sawnews)- Ku-xigeenka Danjiraha dawladda Ingiriiska u fadhiya dalka Itoobiya Mr John Marshal oo socdaal ku jooga Hargeysa, ayaa shalay kulamo gooni gooni ah la yeeshay dhinacyada siyaasada Somaliland.
-Maxaa ka jira in Weftigu Komishanka u bandhigay in xubno ka mid ahi is-casilaaan?
“Madaxweynuhu wuu iska faan jecel yahay ee Shimbir muu dirin. Lacag baan ku shubay buu yidh oo waxba muu shubin”Guddoomiyaha UCID
“Labadayada Xisbi waanu is-ognahay, inkasta oo aanu gooni-gooni u kala aragnay, haddana..”Guddoomiyaha KULMIYE
“Wuxuu u muuqday nin aad xog-ogaal u ah, jecelna in Somaliland aanay..”Guddoomiye-xigeenka Wakiilada
John Marshal oo doraad socdaal aan muddadiisa la sheegin ku yimi Hargeysa, waxa la sheegay in socdaalkiisu la xidhiidho xogogaal u noqoshada khilaafaadka siyaasadeed iyo Sharci ee haatan dalka ka taagan. “Xaalada dalka, mawqifka sida aanu xalka u aragno iyo Sharcigu wuxuu ka qabo ayaanu u sheegnay. Wuxuu u muuqday nin aad xogogaal u ah, jecelna in Somaliland aanay jidka Dimoqraadiyadda ee ay qaadanay ka leexan iyo xaalada guud ee dalku marayo.
Waqtiga Madaxweynuhu wuu dhamaanayaa, waxaananu u sheegnay in aanu umaddu mar dambe qaadanaynin in loo kordhiyo.” Sidaa waxa yidhi Guddoomiye Ku-xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Cabdicasiis Maxamed Samaale.
Guddoomiye Ku-xigeenku waxa uu sheegay in kulankoodaas oo habeen hore ka dhacay hotelka Ambassador, ay kaga si qoto-dheer ugu lafo-gureen xaalada guud ee Somaliland. “Waxa kale oo aanu u sheegnay dhacdadii shalay (doraad) Golaha Wakiilada ka dhacday oo uu dabcan ogaa,” ayuu yidhi. Cabdicasiis Maxamed Samaale waxa uu sheegay in aanu Mr Marshal wax soo-jeedin ah u jeedin Shirguddoon ahaan, isla markaana kulankoodu ku koobnaa is xog-waraysi xaalada guud iyo arrimaha doorashada Madaxtooyada.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay waxay dhinacooda ka wada-hadleen Weftiga, ayaa wuxuu yidhi, “Horta, Ingiriisku qayb Libaax buu ka qaataa Dimuqraadiyadda Somaliland ilaa iyo inta aynu Doorashooyinka bilownay.
Laba qaybood buu ka qaataa oo mar isaga oo Midowga Yurub ku jira ayuu bixiyaa wixii dhaqaale ah, marna si toos ah ayuu u bixiyaa. Had iyo jeerna Somaliland Midowga Yurub waxa uga wakiil ah Ingiriiska. Waana Safaaradda kaliya ee Addis-Ababa inagala soo xidhiidha..Waliba waxa uu Ingiriisku diyaar u yahay haddii la helo xisaab-celin wanaagsan in uu Miisaaniyadda inaga kabo. Ilaa shan goor ayay Dawladda Ingiriisku Wefti soo dirtay, arrintii ay yidhaahdeen Komishanka bedela, waa tii siduu u lahaa (M/weyne Rayaale) waan bedelayaa ay Komishankii iyo Madaxwenihii isku milmeen uu tacabkii Umadda iyo tacabkii Dunida yidhi waxba kama jiraan. Markaa imika murankaas ayuu u yimi, wuu na dhegaystay.
Waxaana isaga (Safiir-xigeenka Ingiriiska ee Itoobiya) iyo Dawladda Itoobiya ayaa si toos ah loo yidhi arrinta u soo xalliya. Wasiirkiisa Arrimaha dibedda Warqad buu ka keenay, isaga oo ka wakiil ah 27-ka Waddan ee Midowga Yurub. markaa arrimihii uu u yimi Wasiiru-dawlaha khaarajiga Itoobiya ayuu daba-taagnaa. Waanu la shaqaynaynaa diyaarna waanu u nahay.
Geesta kale, Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo isagana Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay dhinacooda iyo wixii ay ka wada hadleen Weftiga. “Waxaanu ka wada-hadalnay arrimaha muranka ah ee taagan, waxaanay daba-socdeen Weftigii hore ee Wasiiru-dawlihii Itoobiya iyo hawshiisii.
Markaa dareenka aanu qabno iyo sida aanu wax u aragno ayaanu Qoraal ku siinay, Afkana uga sheegnay oo aanu aad ugu adkaynay qodobada aad ka wada war qabtaan.” Ayuu yidhi Guddoomiye Siilaanyo.
Mar aanu waydiinay in labadooda Xisbi u dhammaayeen kulankaa iyo inay gooni-gooni ula kulmeen ayaa waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “Labadayada Xisbi waanu is-ognahay, inkasta oo aanu gooni-gooni u kala aragnay, haddana Qoraalka waanu wada saxeexnay, isku aragtina waanu ka nahay.” Waxaanu Guddoomiyuhu shacabweynaha ku ammaanay isu-soo-bax ay shalay ku muujiyeen dareenkooda ku aaddan tallaabada Xukuumaddu Ciidanka ku geysay Xarunta Baarlamaanka.
Inkasta oo aanu jirin War rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Komishanka Doorashooyinku, haddana siday tibaaxeen Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, Weftiga uu hoggaaminayo Safiir-xigeenka Ingiriiska ee Itoobiya Mr. John Marshal ayaa kulamo kala dambeeyay shalay ilaa dorraad la yeeshay Xubnaha Komishanka Doorashooyinka. Wararku waxay intaa ku dareen in in kulankii shalay uu dhex maray Mr. Marshall iyo Guddoomiyaha Komishanka Jaamac Maxamuud Cumar (Sweden) oo uu weheliyo Ku-xigeenkiisu Cali Maxamed Cabdalla (Biikalo). Isla markaana uu Safiir-xigeenka Ingiriisku u bandhigay hoggaanka Komishanka inay dalka ku soo laabtaan Hay’adda Interpeace, taas oo uu sheegay in aanay arrimaha Serferka wax hawlo ah ka qaban doonin, balse ay ka hawl-geli doonto arrimaha Dorashada oo uu sheegay inay waayo-aragnimo u leedahay.
Waxa kale oo wararku tibaaxeen in Mr. Marshall ku wargeliyay Komishanka in la hayo dhaqaalihii Doorashada, isla markaana ay lagama-maarmaan tahay in Komishanka wax laga bedelo. Inkasta oo siday Wararku sheegayaan aanay Komishanku jawaab cad ka bixinin soo-jeedimaha Safiir-xigeenka Ingiriiska, haddana waxay u muuqatay inay ka biyo-diideen soo-jeedimahaas intooda badan.
Shan xubnood oo ka mid ah Koox Salaadiin ah ooh ore u shaaciyay inay dhexdhexaadin ka galayaan Khilaafaadka Siyaasadeed, ayaa sidoo kale la sheegay inay la kulmeen Weftiga Safaaradda Ingiriiska ee Itoobiya. Kuwaas oo kala hadlay arrimo la xidhiidha xal-u-helidda khilaafaadka Siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sidii Doorasho xor iyo xalaal ahi dalka uga dhici lahayd.
This entry was posted on August 31, 2009 at 5:29 pm	and is filed under News (Warka). Tagged: News (Warka), Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.